ILAA INTEE IN LA CUNO QOYAANKU WUXUU CUNAA CUNNAANTA KAHOR INTA LA GAWRACO, TILMAAMAHA LAGU QALO QORYAHA - BEERAHA DIGAAGA
Talooyin ku saabsan quudinta broilers. Tilmaamaha qoryaha shimbiraha
Ka hor inta aanad bilaabin wax xayawaan ah, mulkiiluhu wuxuu isku dayaa ugu yaraan qiyaastii si loo xisaabiyo xaddiga loo baahan yahay ee quudinta. Marka maaddada broilers u baahan tahay cunto gaar ah iyo habka quudinta. Kuwani waa digaagga jihada hilibka, iyo horumarinta habboon ee korodhka iyo miisaanka waxay u baahan yihiin in la siiyo quudiyo gaar ah.
Intee in ku filan ayaa feedhuhu cunaan?
Cuntada ugu haboon ee lagu quudiyo shimbirahan waa calafka isku dhafan. Diyaargarow horay loo diyaariyey ayaa lagu iibiyaa dukaamo khaas ah. Miisaanka miisaanka saxda ah wuxuu si toos ah ugu tiirsan yahay inta uu digaaggu iyo qofka weyni cuni doono maalin kasta. Sidaa daraadeed, naaxinimadooda waxaa lagu sameeyaa nidaam gaar ah, oo ay ku jiraan marxaladaha soo socda: xilliga guusha, muddada bilowga, xilliga naaxinta, iyo dhammaadka.
Waa muhiim! Habka korriinshaha sii kordhaya waa in aysan ku faafin waqti dheer, sababtoo ah laba bilood kadib hilibkooda way sii adkaanayaan. Sidaa darteed, si dhakhso ah shimbirta kor u qaado miisaanka, ka sii wanaagsan.
Cunto sax ah maalmaha ugu horeeya waa muhiim, sababtoo ah kiiska ugu weyn waxaa lagu arkay waqtigan gaarka ah. 5ta maalmood ee ugu horreeya, digaaggu wuxuu u baahan yahay qiyaastii 15-20 g oo maalin kasta ah. Waqtigan, dhallinyaradu waxa la quudin doonaa 8 jeer maalintii, si ay caloosha aan weli awood u lahayn in ay dheefshiido cunto. Kobaca maalin walba waa 15 gram. Marxaladdan, cunto fudud si fudud ayaa loo baahan yahay. Intaa waxaa dheer, in lagu quudiyo, sidoo kale masago, oatmeal, jiis iyo jiis la kariyey. Dhamaadka marxaladan, culeyska digaaggu waa inuu ka jiraa 50 illaa 115 g
Akhri xeerarka gawaarida iyo digaagga ee guriga.
Waqtigan xaadirka ah, oo ka bilaabma 6 maalmood wuxuuna soconayaa 20, digaag kasta maalin kasta waa inuu ka helo 30 g (bilowga) ilaa 80 g (dhamaadka). Tani macnaheedu waa in xaddiga cuntada ay si tartiib tartiib ah u sii kordheyso. Tirada quudinta ayaa la dhimi karaa ilaa 5 jeer. Miisaannada helitaanka maalintii waa inay ahaataa 30 g, oo dhammaadka wakhtiga culeyska digaaggu waa inuu ka jiraa 120 ilaa 650 g. Waqtigaan, cagaarka, bocorka iyo karootada digaaga ayaa loo soo bandhigay cuntada. Xilliga jiilaalka, maqnaanshaha cawska cagaaran, waxaa lagu beddelay cunto cagaaran ama cawska. Waa in sidoo kale la xusuustaa in digaagga u baahan yahay biyo ku filan.
Ma taqaanaa? Xataa da'da 1 cisho, xajmiga caanaha digaagga broiler ayaa laga yaabaa inay kala soocaan ilmaha yaryar ee noocyada kale - waxay lahaan doonaan hal iyo badh jeer kabaro badan.
Tani waa xilligii miisaankii ugu weynaa, oo sidaas darteed xaddiga quudinta ayaa si aad ah u kordha. Ilaa 40 maalmood, shimbiruhu waxay u baahan yihiin inay helaan ugu yaraan 100-150 g oo cunto ah maalintii. Quudinta xilligaas waxay saameyn weyn ku leedahay korodhka miisaanka, kaas oo ah in uu gaaro tilmaame 0.7 illaa 2.1 kg. Miisaan wanaagsan oo wanaagsan ayaa lagu gaari karaa adigoo ku barbaarinaya barandhada la kariyey, kefir, iyo cunnada qorraxda.
Baro sida loo quudiyo loona ilaaliyo digaagga broiler.
Kalluunka cusbada leh iyo khamiiraha ayaa lagu dari karaa mashka (200 g oo khamiir ah, kaas oo lagu qasi karo biyo diirran ama caano) ayaa lagu daraa 10 kg oo cunto ah. Tirada codsiyada quudinta ayaa la dhimi karaa ilaa 3-4 jeer. Haddii shimbirku helo quudinta saxda ah, markaa miisaanka maalinlaha ahi waa inuu ka yar yahay 50-55 g.
Dhamaadka, broilers ayaa la quudiyaa 2 jeer maalintii, laakiin xaddiga feedku waa inuu ahaadaa ugu yaraan 160-170 g. Da'da 1 bilood ka badan, shimbirta waa la quudin karaa aan la jajabin, laakiin hadhuudhka oo dhan, cuntada waa inuu jiraa quudin iyo caws. Waqtigaan, mugga cuntada waa ugu sarreeyaa, iyo dhamaadka (da'da 2 bilood) shimbir ayaa la gowracay. Waqtigaan, waa in uu gaaro miisaanka 2.1-2.5 kg. Quudinta dheeraad ah ma keeni doonto saamaynta la rabay iyo content ee digaagga noqdaan wax aan macquul ahayn.
Fiiri nalka ugu fiican ee broiler.
Sidee loo xisaabiyaa mugga wadarta
Xisaabi tirada nuujinta muddooyinka:
in xilliga prelaunch ee maalinta digaag cuno 15-20 g oo quudin. Isku-darka shan maalmood, waxaan helnaa in misigta ay u baahan tahay 100 g oo cunto ah;
mudada bilowga ah, xaddiga cuntada ayaa kordha. Celcelis ahaan, shimbirku wuxuu helaa qiyaas ahaan 50 garaam oo cunto ah maalin kasta, iyo waqti kasta waxay cuni doontaa 750 garaam;
Marxaladda naaxinta, broilers waxay helayaan mugga cuntada, taas oo u dhiganta 100-150 g maalintii. Isku dhufasho ilaa 20 maalmood, waxaan helnaa 2-2.5 kg oo cunto ah;
Qeybta dhammaadka maalinlaha waa bajoogu ubaahan yahay 160 g oo quudin, sidaas darteed waqti kasta wuxuu cuni doonaa 3.2 kg.
Xeerarka loogu talogalay quudinta macdanta guriga Marka laga eego xisaabinta waxaa la arki karaa in kuwa carafiyiinta ay cuni doonaan inta ugu badan ee cuntada ah marxaladda quudinta iyo marxaladda dhammeystiran. Guud ahaan, ka hor inta la gowraco, digaaga ayaa u baahan 6 ilaa 6.5 kg oo cunto ah.
Ma taqaanaa? Ereyga "broiler" ee Ingiriisku micnihiisu yahay "dabka ku shub."
Loogu talagalay in la gowraco
Si loo fududeeyo shimbiraha gawaarida mararka qaarkood waxay isticmaalaan shuban. Waxaa ka sameysan bir birta leh cabbiraha noocaas oo digaaggu ku haboon yahay, madaxna wuxuu ku dhegi karaa daloolka. Xaaladdan oo kale, jidhku si fiican ayuu u taaganyahay, waana mid aad u fudud in la jaro dhuunta - taas waxaa lagu sameeyaa maqaarka ama mindi, ka dib markii baqtigu uu ka tagay dhowr daqiiqadood si uu u dhiig baxo. Iyada oo habkan la gawraco shimbiruhu ma duugoobin mana dhaawacmo. Wixii soo saaris ah ee koontooyinka, marka lagu daro birta, looxa la isticmaalay, linoleum ama galvanized.
Shimbirta ayaa la kiciyaa si ay u soo saarto hilibka iyo badeecada ukunta, iyo markiiba ama digaagga waa in la la gowraco. Warshadaha, geeddi-socodkani waa automated oo dhacaya dhowr daqiiqadood. Guriga, way ka sii adag tahay waxayna qaadataa waqti badan. Si loo fududeeyo casharkan, waxaan ku siin doonaa talooyin kooban oo ku saabsan geeddi-socodka oo dhan.
Ka hor inta aadan dilin broiler, marka hore waxaad u baahan tahay inaad isku diyaariso arintan:
Maalinta ka hor inta aan la gowraco, waa inaad soo xushaa shakhsiga ku habboon;
Si tartiib ah u qaado boogaha, si aanay wax u waxyeeleyn;
Si loo dhigo qol gaar ah ama qolka;
Ka hor inta aan la gowraco, looma siin wax cunto ah, laakiin waa la waraabiyey oo keliya si ay u taabato mindhicirka. Si aad u dardargeliso nadiifinta halkii aad ka heli lahayd biyaha, waxaad siin kartaa 2% oo ah milix Glauber. Metabolism-ku wuxuu kicinayaa haddii aadan iftiimin nalka.
Waa suurtogal in la gawraco broiler iyadoo la adeegsanayo habab badan. Mid ka mid ah waa habka dibadda:
Shimbir shuunta adoo garaaca madaxa.
Ku rid shinni ama adoo dhuujinaya dhoobada adigoo ku dhejinaya lakab ama lakab.
Maqasyo ama mindi fiiqan si aad u gooyo dhuunta gadaasheeda (waxaad iska jareysaa madaxa oo ku dheggan).
U daadi dhiig.
Waa muhiim! Habkani wuxuu leeyahay faa'iido darro, taas oo ka kooban gudaha bakteeriyada hilib dhiig leh. Bakhtigu waa in isla markiiba la kariyaa ama la qaboojiyaa.
Waxaad isticmaali kartaa hababka gudaha, oo badanaa loo isticmaalo beeraha digaaga:
Broiler ayaa isbedelay.
Ku dheji paws ama meel konfiye ah.
Si aad u furto guluub waxaad u baahan tahay inaad gujiso dhibcaha udhexeeya indhaha iyo indhaha.
Geli maqlaha ama mindi leh mindhicir dhuuban oo giigsanaya oo jar dhammaan weelasha muhiimka ah.
Meel ku dheji maskaxda.
Video: Gawaarida qoryaha
Marka dhiiga laga saaro barkad qubayska, tallaabooyinka soo socda ayaa la qaadayaa:
Biyaha tuubada hooseysa biyaha kulul ilaa 65 ... 70 darajo. Ku hay ilaa hal daqiiqo.
Miiska saarista mooshin wareeg ah si loo baadho baadadaha.
Ku hay shimbirta dabka ka baxsan si aad uga takhalusto timaha haray.
Sidoo kale akhri sidii aad uga dhigi laheyd digaag guriga.
Nidaamku wuxuu ka kooban yahay dhowr marxaladood:
Meesha ka mid ah goiter si tartiib ah jeexdin maqaarka.
Goynta goosta maqaarka, ka soo jiid ilaa madaxa.
Ka dib markaa, xir xiraha gadhka.
Furi bakhtigu ku yaal meelihii cirifka adigoo jeexjeexaya.
Si aad u adkeyso mindhicirrada, ka soocida dusha sare.
Kala soo baxa calaamadaha gooynta.
Bakhtigu waa diyaar. Waxaad u isticmaali kartaa diyaarinta dheeraad ah. Waxaan si kooban u sheegnay xisaabinta xaddiga loo baahan yahay ee quudinta loogu talagalay broilers sii kordhaya, iyo sidoo kale tilmaamo on gowracay ee digaagga. Waxaan rajeyneynaa in maqaalkeenu kuu noqon doono mid waxtar kuu leh oo kaa caawin doona si aad u hesho faham yar oo ku saabsan dareenka wershadaha digaaga. Ganacsi wanaagsan iyo shimbir caafimaad leh!